Daawwannaan ministiroota dhimma alaa mootummaa ce'umsaa hundeessuuf miti
Torban kana keessa ministiroonni dhimma alaa biyyoota sadii Itoophiyaa daawwataa jiru. Kunneenis, Reeksi Telersan kan Ameerikaa, Sargeeyi Laaviroov kan Ruusiyaafi Shek Abdullaah Binzayid Alnaahiya kan Imireetota Arabaa Walta’aniiti.
Daawwannaa ministiroota kanneenii ilaalchisuun yaadoonni faallaa gama garagaraatiin dhaga'aamaa jiru. Yaadonni kunneenis daawwannaan ministirootaa kun keessumaa kan Ministira Dhimmaa Alaa Ameerikaa haala Itoophiyaan yeroo ammaa irra jirtu hubachuun mootummaa cee'umsaa hundeessuuf kan taasifamudha kan jedhudha.
Bakka buutonni paartilee siyaasaafi ogeessoonni siyaasaa tokko tokko yaada miidiyaaleef kennaa jiru. Keessumaa bakka buutoonni paartii moormitootaa tokko tokko akka jedhanitti, mootummaan Ameerikaa kanaan dura wayita paartileen waamicha taasisaniif osoo hindhufin wayita kana dhufuun isaanii haalli biyyattuii waan isaan yaachisiseefi jedhu.
Kanaan dura Itoophiyaan hojii nageenya eegsisuu biyyoota biroorratti hirmaachuun hojii gaarii hojjechuusheetiin dhiibbaa irratti taasisuu akka hinbarbaanneefi amma garuu biyyattiin ofiifuu rakkoo keessa jiraachuusheetiin deggarsa taasisuuf akka dhufan dubbatu.
Yaadni gama mootummaa Itoophiyaatiin jiru garuu gonkumaa kanarraan faallaadha. Oduu himaan Ministeera Dhimma Alaa Itoophiyaa Obbo Mallas Alam akka ibsanitti, angawootni biyyoota kanneenii Finfinnee seenuunsaanii haala wayitawaa biyyattiin keessa jirtu waliin tasumaa kan walqabatu miti. Dhimma siyaasaa biyyattiirratti murteessuuf aangoo kan qabu lammiileefi mootummaa Itoophiyaa qofa ta'uu cimsanii ibsu.
Daawwannaan ministiroota kanneenis dursee kan karoorafameefi hariiro siyaas-dinagdee waliinii cimsuuf yaadamee kan taasifame malee ammuma yaadamee kan taasifame waan hintaaneef gonkuma dhimma wayitii biyyattii waliin akka wal hinqabanne addeessu.
Ittigaafatamaan Waajjira Adda Dimokraatawaa Warraaqsa Ummattoota Itoophiyaa (ADWUI) Obbo Shifarraa Shigguxee yaa'ii dhaabichaa ilaalchisuun wayita gaazexeessitootaaf ibsa kennan, gaaffii ministiroonni kunnene kan dhufan hundeeffama mootummaarratti dhiibbaa taasisuufi” jedhee ka'eef deebii kennaniin, dhaabichi hojmaata mataasaatiin kan gaggeeffamu malee dhiibba biyya kamiitiin iyyuu kan hogganamu miti jedhaniiru.
Adeemsa ministira muummee filachuu keessattis dhaabichi ulaagaa ifaa ta'e kan qabuufi kanaan duras isumaan hojjetaa kan ture ta'uu eeranii, hojmaata kana keessatti ittigaafatamummaa kan qabu miseensoota Mana Mareefi Koree Hojii Raawwachiiftuu ADWUI qofa ta'uu himaniiru. Kanaafuu daawwannaan ministiroota kanneeniin akkuma kanaan dura aanga'oonni biyyoota addaddaa dhufanii Itopphiyaa daawwatanii deebi'aa turanitti kan ilaalamu malee hiikni biraa kennamuufii kan malu miti jechuun hubachiisu.
Dimshaashumatti, daawwannaan ministiroota dhimma alaa biyyoota sadeenii kun hariiroo biyyattiin biyyoota kaan waliin qabdu kan cimsu ta'uu isaatiin karaa kamiinuu taanaan miidhaa kan qabu miti. Keessumaa biyyattiin hariiroo siyaas-dinagdee biyyoota addunyaa waliin qabdu cimsuun ishee kan jajamuufi bu'aa olaanaa kan qabudha. Muuxannoo kanaan duraatiinis dippiloomaatonni dhufanii Itoophiyaa daawwatan dhimma siyaasa biyyattii keessa harka galfachaa hinturre; warreen ammaas waan galfataniif hinqaban. Kanaafuu daawwannaan isaanii akka carraa gaariitti fudhatamu qaba.
Torban kana/This_Week 11152
Torban darbe/This_Month 97509
Guyyaa mara/All_Days 1435932